» “पूर्वराजा,को एउटा बोलीले” हिल्लीयो, गणतन्त्रको जग,! “पूर्वराजा,को एउटा बोलीले” हिल्लीयो, गणतन्त्रको जग,! – हाम्रो खबर
हाम्रो खबर संबाद दाता 32 Views
“विजया दशमीको अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको एउटा बक्तव्यले गणतन्त्रको जग नै हल्लिएको जसो गरि रुवावासी सुरु भएको छ ।”
“शुभकामना सन्देशमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजतन्त्र विनाको प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्र बिनाको राजतन्त्रले पनि देश अघि बढ्न नसक्ने भन्दै प्रजातन्त्र सहितको राजसंस्थामा जानु पर्ने सन्देश दिएका थिए । त्यस पछि विभिन्न टिकाटिप्णी भएको छ ।”
“पूर्वराजाको सन्देशले राजावादीहरु निकै खुशि भएका छन् । राजसंस्थाका पक्षमा निरन्तर लागीरहेका व्यक्तीहरुले यसले एउटा महत्वपुर्ण बहसको सुरुवात गर्ने विश्वास लिएका छन् भने उग्र राजावादीहरुले नारायणहिटीनै सफा गर्न थाल्नु पर्ने सम्मका कुरा गर्न थाली सके ।”
“पुर्वराजाको अभिव्यक्तीलाई कतिपय गणतन्त्रवादी नेताहरुले पनि सामान्य रुपमा लिएका छन् । नागरिकका हैसियतमा रहेको ज्ञानेन्द्रले संविधानको दायरा भित्र रहेर बोल्दैमा आत्तिनु नपर्ने उनीहरुको मत छ ।तर उग्र गणतन्त्रबादीले उल्का गरेका छन् ।”
“पूर्वराजाको अभिव्यक्ती पछि विशेष गरी बावुराम भट्टराई टाइपका मान्छेहरु बुरुक्क उफ्रिएका छन् । पूर्वराजाले देशलाई द्धन्द्धमा लान खोजको भन्दै गणतन्त्रका विरुद्ध आँखा नलगाउँन चेतावनी दिएका छन् । भोलीनै गणतन्त्र गएर राजतन्त्र आउँने जसरी उनीहरु अत्तालिएका छन् ।”
“बावुराम भट्टराईहरु अत्तालिएको देख्दा पूर्वराजाको एउटा वक्तव्यलेनै हल्लीने गणतन्त्रको जग कस्तो हो भनेर पनि सामाजिक संजालमा प्रश्न उठेको छ । राजसंस्था पक्षधरहरुले अहिले विशेष गरी बावुराम भट्टराइको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् ।”